Dadweynaha Boosaaso oo ka hadlay hoos u dhicii ugu weynaa ee Sarifka Lacagaha – SBC
Dadweynaha Boosaaso oo ka hadlay hoos u dhicii ugu weynaa ee Sarifka Lacagaha
Posted by Webmaster on March 8, 2012 Comments
Dadweynaha kudhaqan deegaanana Puntland oo walaacii ugudarnaa ka muujiyeey hoos udhaca sarifka laacgaha qolaad.
Waxaa deeganadada Puntland lagadaeareemayaa hoos udhacii ugudarnaa ee dhanka sarifka lacagaha doolanrka ah.
Waxaa dadweynaha kusugan magaladada Boosaaso ee xaruunta gobolka Bari ay cabashooyiin aad udaran maanta ka muujiyeen sarifka Lacagaha Qalaad oo hoos usiidhacaya maalinba maalinta kadanbaysa.
Sarifkan ayaa maanta ahaa mid ay dadka Boosaaso ku sugan kayaabiyeey oo markii ugu horeysay heerkiisa hoo u dhac gaaray labo malyan oo shilinka somaaliga ah tan iyo sanadihii ugu dambeeyay.
Dhanka kale maciishada daruuriga ayaan iyaduu waxba iska badalin in uu kor usiikacomooye halka uu sarifkuna ahay mid kor hoos u sii dhacaya, taasi oo saameen kuyeeshay guud ahaanba dadka kusugan Boosaaso,
Mar aan maanta boqasho ku tagnay suuqa weyn ee Boosaaso ayaa waxa laga dheehan karay guud ahaantiisba shaqo joojin ay ku dhaqaaqeen ganacsatadii ka ganacsanjirtay waxyabihii kala gedisanaa iyagoona sheegay mar ay la hadleen SBC In ay u sameynayaan shaqo joojintan doolarkii oo hoos u dhacay .
Qaar ka mid ah ganacsatada iyo Dadweyne kale oo markaasi suuqa u soo doontay adeeg ayaa iyaguna sheegay in ay si aad ah uga yaabanyihiin xaaladaha kala gedisan ee uu marayo Sarifka iyo heerarka ay joogaan maciishada qeybeheeda kala gedisan taasna ay ku tilmaameen mid ay siweyn uga xumaadeen.
Sikastaba ha ahaatee Wasiirka wasaaradada ganacsigaga iyo warshadahaha ee Puntland Xasan Farax Jaamac oo wareysi siiyay SBC International ayaa sheegay in sarifkaan maalin walba hoos udhacaya ay ogtahay dowladada Puntland ganacsatadana looga baahanyahay in ay gudi soo xuulato si looga wadahadlo ariinkaas .
Casiiso C/kariin Muuse
Waxay ila tahay arin murugsan waayo waxay shacabku ku wereerayaaan sicirka dolarka oo maalin walba is badalaya waxan ganacsatada iyo dawlada guud ahanba aan ka codsanaya inay arintan aad u eegaan waayo ganacsatadu dadaka ayeey ka dhex ganacsanyaan waa inay eegaan bulshadoda dawladuna iyada looga bahanyahay siday arintan wax uga qaban lahayd
aadan cabdisamad says:
hadiii aan kahad lo fikir kay ga ku adan sicir barar ka waa wax ka yimi xag rabi waana laim tixaamayaa umada reer boosaasod dabkii waxa kuxigey qiima dhaca lacag ta mar ka waxaan usoo jeedinaya umada reer boosaso in aysam raan alena bar yaan